तपाईको मोबाइल भिज्यो ? यसो गर्नुस् » Khulla Sanchar
तपाईको मोबाइल भिज्यो ? यसो गर्नुस्
आफ्नो मोबाइल फोन पानीमा भिज्ला र बिग्रिएला भन्ने डर सबैलाई हुन्छ । कहिलेकाहीँ सावधानी अपनाउँदा पनि मोबाइल फोन भिज्न सक्छ । त्यसो हुँदा केही उपाय अपनाउनु पर्छ । ता कि मोबाइल फोनमा पानीले असर नपरोस् । स्मार्टफोन भिजिहाल्यो भने यसरी स्याहार गर्नुपर्छः
१.तत्कालै मोबाइल स्विच अफ गर्नुस्ः
२.ब्याट्रीको स्टिकर जाँच गर्नुस्ः
३. विस्तारै फोन पुछ्नुहोस्ः
४. चामलभित्र घुसाउनुहोस् :
मोबाइललाई सुख्खा प्लास्टिक ब्याग तथा हावा नछिर्ने भाँडोमा राख्नुपर्छ । त्यस्तै मोबाइललाई चामल भरिएको भाँडोमा चामलभित्र घुसाएर रातभर राख्नुहोस् । चामलले मोबाइल भित्रको पानी सोस्दछ ।
५. चौबिस घण्टा कुर्नुहोसः
मोबाइल फोन भिजिसकेपछि यसलाई पुनः सुचारु गर्न कम्तीमा पनि एक दिन कुर्नुपर्छ । तबमात्र यसभित्रको पूरै चिस्यान र पानी बाहिर निकाल्न सकिन्छ । मोबाइलको भित्री भाग, पोर्ट, ड्राइभ तथा कुनाकाप्चामा पानी तथा चिस्यान छैन र सुख्खा छ भन्ने निश्चित गर्नुहोस् । ब्याट्री राखेर मोबाइल रिस्टार्ट गर्नुहोस् । रिस्टार्ट भएन भने नजिकैको मोबाइल मर्मत केन्द्रमा लगिहालनुहोस् ।